यी हुन् सुध्रिन नसकेकी ‘काण्डकारी’ जवान श्रीमती « Chautari Online
यी हुन् सुध्रिन नसकेकी ‘काण्डकारी’ जवान श्रीमती
सन्धिखर्क, २५ भदौ । परपुरुषसँग मिलेर आफ्नै पतिको हत्या गर्ने कपिलवस्तुकी राधा घर्तीलाई अर्घाखाँची प्रहरीले पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ । राधासँग उनका प्रेमी रमेश विक र राधाकी आमा बसुन्धरा बस्यालाई पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
अर्घखाँची प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर राधा घर्तीका पति धनबहादुर घर्तीको हत्या प्रकरणका बारेमा जानकारी गराएको हो । कपिलवस्तु जिल्लाको बाडगंगा नगरपालिका निवासी राधाले भदौ ९ गते आफ्नै घरमा प्रेमी रमेश विकलाई राखेर तीन दिनसम्म अवैध यौनसम्बन्ध बनाएकी थिइन् ।छिमेकीहरूले रमेश विकका बारेमा सोधपुछ गर्न थालेपछि राधाले प्रेमी रमेश विकलाई साथमा लिएर बाडगंगाबाट माइती जिल्ला अर्घखाँची पुगेकी थिइन् । कामको सिलसिलामा बागलुङमा रहेका पति धनबहादुर घर्तीले पत्नीको गलत क्रियाकलापको सुईको पाइसकेका थिए ।झन् पत्नी माइत गएको थाहा पाएपछि बागुलङबाट भदौ १२ गते धनबहादुर घर्ती बाडगंगास्थित घरमा आइपुगेका थिए । परपुरुषसँग माइतीमा रहेको थाहा पाएपछि धनबहादुर घर्ती भदौ १३ गते साँझ अर्घखाँची जिल्लाको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नं. १२ स्थित ससुरा पुनाराम बस्याल र सासु बसुन्धरा बस्यालको घरमा पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।
रक्सी र कुखुराको मासु
ससुरा पुनाराम बस्याल, पत्नी राधाका प्रेमी रमेश विक र धनबहादुर घर्तीले राति साढे आठ बजेसम्म कुखुराको मासु र रक्सी खाएका थिए । त्यस क्रममा धनबहादुर घर्तीलाई अत्याधिक रक्सी सेवन गराइएको थियो । रक्सी सेवनका बेला रमेश र धनबहादुरको भनाभन पनि भएको थियो ।राधालाई लिएर भुइँतलामा झरे रमेशरक्सी सेवन गरेर भुइँतलामा सुतेका धनबहादुर घर्तीलाई भदौ १३ गते राति ११ बजे रमेश विक र राधा घर्तीले हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ । राति ११ बजेदेखि ११ः५५ मिनटभित्रको समयमा धनबहादुरको हत्या भएको थियो । धनबहादुरको घाँटीमा रमेश विकले थिँचेका थिए । राधाले आफ्नै पति धनबहादुर घर्तीको अण्डकोषमा लात्तिले पटक–पटक प्रहार गरेकी थिइन् । हत्या गर्नु अगाडि सासु बसुन्धरा बस्यालले घरभित्र ज्वाइँ धनबहादुर घर्तीको हत्या नगर्न बरु घर बाहिर लगेर हत्या गर्न सुझाव दिएकी थिइन् । तर, रमेश विकले केही हुँदैन घरभित्रै सुरक्षित हुन्छ भनेपछि घरभित्रै हत्या गर्न सासु बसुन्धराले स्वीकृति दिएकी थिइन् ।शव फाल्ने ठाउँ सासुले देखाइन्धनबहादुर घर्तीको हत्या भइसकेपछि सासु बसुन्धरा बस्यालले शव फाल्ने स्थान देखाइदिएकी थिइन् । धनबहादुरको शवलाई सडकदेखि १५ फिट तल खोल्सामा बोरामा हालेर हात खुट्टा बाँधिएको अवस्थामा फालिएको थियो ।
पतिको सनाखत गर्न अस्वीकार
भदौ १८ गते बिहान करीव ८ बजे जंगलमा दुर्गन्धन फैलिएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । शव पहिचान गर्न राधालाई स्थानीयको सहयोगमा प्रहरीले बोलाएको थियो । तर, राधाले शवको सनाखत गर्न अस्वीकार गरेर फिर्ता भइन् । त्यस बेला राधालाई तिम्रै पतिको शव जस्तो छ भनेर स्थानीयले भनेका थिए । राधाले झर्किदै भनेकी थिइन्, ‘मेरो श्रीमान् मैले चिन्ने हो कि तपाईले ?’ त्यसपछि राधामाथि प्रहरीले निगरानी शुरु गरेको थियो ।स्थानीयले शव त राधाका पति धनबहादुर घर्तीको जस्तो छ भनेर भनेपछि पुनः राधालाई सनाखत गर्न बोलाइएको थियो । राधाले घडीसहितका सामानले आफ्नो पति भएको स्वीकार गरेकी थिइन् । पहिलो पटक शव सनाखत नगरेर गएकी राधाले घरमा शंकास्पद गतिविधि देखाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
राधा र रमेशबीच ४–५ वर्षदेखि यौनसम्बन्ध
धनबहादुर घर्तीसँग विवाह गरेकी राधा घर्ती विगत ४–५ वर्षदेखि पश्चिम रुकुमका विवाहित रमेश विकसँग अवैध यौनसम्बन्ध र प्रेममा थिइन् । उनीहरू भारतमा झण्डै तीन वर्ष अगाडि एक वर्षसम्म पति–पत्नीका रुपमा सँगै बसेका थिए । त्यस बेला राधाको कोखमा रमेश विकको ८ महिनाको गर्भ पनि थियो । तर, राधाका पति धनबहादुर घर्तीले जे भए पनि पत्नीलाई स्वीकार गर्छु भनेर ल्याएका थिए । राधालाई नेपालमा ल्याएर आठ महिनाको गर्भ फालेर राम्रोसँग बसेका थिए ।राधाले नै रमेशलाई बोलाइन्
३३ वर्षीय राधा घर्तीकै आग्रह र सल्लाहमा ३० वर्षीय रमेश विक भदौ ९ गते साउदी अरबबाट नेपाल आएका थिए । काठमाडौंबाट सिधै कपिलवस्तुको बाडगंगास्थित राधाको घरमा पुगेर रमेश विक तीनदिनसम्म त्यहीँ बसेका थिए । तीनदिन बसेपछि राधा घर्ती र रमेश विक एक साथ राधाको माइती घर अर्घखाँचीको सन्धिखर्क गएका थिए । माइतीमा नै राधा र रमेशले धनबहादुरको हत्या गर्ने योजना बनाए । उनीहरूले धनबहादुर घर्तीको हत्या गरेर सधैका लागि एकसाथ बस्ने तयारी गरेका थिए ।
पतिले दिएका थिए राधालाई सुध्रिने मौका
राधा घर्ती र पश्चिम रुकुमको बाफिकोट गाउँपालिका वडा नं. १ का रमेश विकबीच सम्बन्ध रहेको राधाका पति धनबहादुर घर्तीलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि अनदेखा गरेका थिए । तैपनि राधालाई सुध्रिने मौका पटक–पटक दिए । तर, राधाले कहिल्यै पनि आफूलाई सुधार गर्न चाहिनन् । रमेश विकसँग अवैध यौनसम्बन्धमा रहिन् ।राधाको नाममा लाखौँको सम्पत्तिराधा घर्तीको नाममा बाडगंगा नगरपालिकामा दुई ठाउँमा घडेरी छन् । घडेरीको बजार मूल्य ७०–७५ लाख पर्ने प्रहरीले जनाएको छ । राधाको नाममा १०–१२ लाख बैंक ब्यालेन्स छ । राधाले ३–४ लाख रुपियाँ व्याजमा पनि लगाएकी छिन् । पति धनबहादुर घर्तीले राधाको चरित्रबारेमा जानकार हुँदाहुँदै पनि विश्वास गरेर नगदका साथै घडेरी नाममा गरिदिएका थिए ।
यसरी बन्यो रमेशलाई पक्राउ गर्ने योजना
धनबहादुर घर्तीको हत्या गरेर फरार रहेका रमेश विकलाई पक्राउ गर्न पश्चिम रुकुम र सल्यान प्रहरीका साथै नेपाल टेलिकमको सहयोग अर्घखाँची प्रहरीले लिएको थियो । धनबहादुरको हत्या राधा र प्रेमी रमेश मिलेर गरेको पुष्टि भइसकेपछि प्रहरीले रमेशलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन गरेको थियो ।रणनैतिक रुपमा राधाले थाहा नपाउने गरी निगरानीमा राखेको थियो । राधालाई पक्राउ गरिएको थिएन । राधाले रमेशसँग पटक–पटक फोनमा सम्पर्क गरेकी थिइन् । त्यही मोबाइल सम्पर्कले रमेशको लोकेशन पत्ता लगायो । प्रहरीले बाफिकोट, खलंगाबजार हुँदै सल्यानको शीतलपाटीमा रमेशलाई पक्राउ गरेको थियो । रमेश नेपालगञ्ज, रुपैडिहवा हुँदै भारत प्रवेशको योजनामा थिए ।राधामाथि रमेशको अविश्वासधनबहादुरको हत्यापछि फरार रहेका रमेशले राधालाई पनि विश्वास गरेका थिएनन् । राधाले पक्राउ गराउन आफूलाई फोनमा सम्पर्क गर्ने गरेको आशंका गरेका थिए । धनबहादुरको हत्याका विषयमा फेसबुकबाट जानकारी लिँदै आएका थिए । रमेशले राधालाई पनि प्रहरीको अनुसन्धानका बारेमा सोध्ने गर्थे । रमेशले राधालाई विभिन्न बहाना बनाएर पन्छाउने प्रयास गरेका थिए ।